प्रवास « Salleri Khabar
नेपाली विद्यार्थीलाई अमेरिकाबाट फर्काइयो, पढाई अलपत्र हुने
सी भी पीका गतिविधि अहिले अलि बढी आक्रमक भएका हुँदा विद्यार्थी र अरू भिसामा आउनेलाई फर्काउने क्रम बढेको हो ।
पछिल्लो २ वर्षभित्र नेपाली कामदारका परिवारले कुवेती रोजगारदाताबाट झन्डै १० करोड रुपैयाँ बरारको क्षतिपूर्ति पाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुवेत गएर सम्झौता अवधिमा मुत्यु भएकाको विभिन्न कारणले रोकिएको क्षतिपूर्तिबापतको
सामाजिक संजालमा नीति शाहको चर्को आलोचना, आखिर आलोचित हुनुको कारण के हो ? (भिडियो)
‘मिस नेपाल इन्टरनेशनल २०१७’को उपाधि जितेकी मोडल नीती शाहको अहिले निकै आलोचना भइरहेको छ । ‘मिस इन्टरनेशनल’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नीती जापान पुगेकी हुन् । नीतीले अन्तरराष्ट्रिय प्लेटर्फममा नेपालबाट प्रतिनिधित्व
प्रकाशित मिति : 15 November, 2017
तिब्बतका नेपाली भए राज्यविहीन, न चिनीयाँ न त नेपाली !
तिब्बतको ल्हासामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई सरकारले नागरिकता र पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सकेको छैन भन्ने खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ । नेपाली मूलका पुरुष र तिब्बेतियन मूलका महिलाबाट जन्मिएका सन्तती बर्षौं
प्रकाशित मिति : 14 September, 2017
काठमाडौँ, साउन २४ गते । खाडीमुलुकमा कति संख्यामा नेपाली कामदार रहेका छन् भन्ने यकिन जानकारी नेपालका कुनै निकायसित छैन । खाडीमुलुकमा अवैध ढंगले पु¥याइका घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थल
प्रकाशित मिति : 8 August, 2017
सन् २०१६ मा इराकमा छ हजार ८७८ सर्वसाधारण मारिए
बग्दाद, १९ पुस । सन् २०१६ मा इराकमा भएका हिंसाहरुमा परी कम्ती छ हजार ८७८ सर्वसधारणको ज्यान गुमाएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हालै जानकारी दिएको छ । इराकको लागि संयुक्त राष्ट्र
प्रकाशित मिति :3January, 2017
अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल सरकारका परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई टेलिफोन गरेर साउदी अरब, श्रीलंका लगायत देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउन दिएका छन् । साउदी अरबमा कम्पनीहरू
प्रकाशित मिति : 8 August, 2016
मलाई कुनै सृजनाका आहलहरुमा डुबुल्की मारेर आफूलाई उत्तम सर्जकको स्तर मा पुर्याउने कुनै रहर छैन।नत म कुनै आफूलाई स्रजक नै ठान्छु।तर पनि जीवनका तिता मिठा भोगाइहरुलाइ मनमा गुम्साएर राख्ने चलन
जापान जानेका लागि खुसीको खबर
२१ असार, जापान बिष्णु अर्याल जापानमा अध्ययन गर्न आउने नेपाली सहित विश्वभरका विद्यार्थीहरूको लागि खुसीको खबर छ । त्यो हो जापान सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि अब ग्रिन कार्ड लागू गर्ने